बैंकिङ कसुरबाट जोगिन के गर्ने ? ( हेरौं यी १२ बुँदा) ~ Banking Khabar
बैंकिङ कसुरबाट जोगिन के गर्ने ? ( हेरौं यी १२ बुँदा)
बैंकिङ बखर । अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन हुँदैन । अन्यथा बैंकिङ कसुर लाग्न सक्छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा वा दिँदा देहायको कार्य गर्नु हुँदैनःगलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन हुँदैन ।